Inona no The Top 8 Pizzas In Italia | Save A Train
Home > Fiaran-dalamby any Italia > Inona no The Top 8 Pizzas In Italia
Inona no The Top 8 Pizzas In Italia
(Last Nohavaozina: 08/10/2021)
Iza no toerana tsara kokoa mankafy ny pizza noho ilay firenena namorona azy, marina? Italiana fitiavana, fitiavana, tia izany matsiro sakafo maivana-lasa-sakafo! Tsy mahagaga àry raha pizzas in Italia dia nivadika ho madio amin'ny teny kanto, ary farany, UNESCO-nankatoavina!
Mivezivezy manodidina Italia, hahita pizzerias nosokafana tamin'ny taonjato faha-18, fa koa ny vaovao, amin'ny fomba vaovao tanteraka ny mofo. Misy an-jatony ny karazana tena ratsy safidy, toppings, habe, ary ny tsirony. Raha tsorina dia, tsy afaka manana ny pizza dinganina indray mandeha, fara fahakeliny, mandritra ny fitsidihana ity tsara tarehy Mediterane firenena… Okay? tsara. Na dia tsy misy ny pizza mpankafy, Zavatra chefs hahazo anao hanova ny sainao
Ny lisitray dia hanome anao trano fisakafoanana malaza any Roma, Milan, Florence, Naples, ary Verona. Ireto ny ambony 8 pizzas in Italia.
FANAMARIHANA: Aza adino ny télécharger ny fampiharana Travel faran'izay mahasoa alohan'ny hanombohanao ny dianareo.
Da Vittorio in Trastevere, Roma: Ny pizza miaraka amin'ny sahisahy fiovana
Dia pick ny Pizzas In Italia, dia afaka handray anjara amin'ny santionany amin'ny "Tre Colori Pizza." telo samihafa sakafo Masiaka manao ho mena, fotsy, ary pizza maitso, tahaka ny Italiana sainam-pirenena. Miezaha tsy hamela ny jalapeno peppers, Masiaka Sicilian saosisy, sy ny tangy fromazy fotsy mandoro ny vavanao. Raha hamita ny pizza rehetra ao 10 minitra na latsaka ianao mandresy ny loka. Ankoatra ny ity fitsipika ity, ianao koa tsy afaka misotro mihoatra noho ny 16 ounces ny rano na labiera. Ny mpandresy mahazo ny sakafo maimaim-poana, tee-shirt, ary sary navoaka teo amin'ny rindrin'ny laza. ary, Inona no mitranga raha tsy hanaovanao azy? Afaka miezaka foana indray, dia tsarovy ity toerana ity rehefa mandeha ho any Roma.
PIZZERIA Da Attilio, Naples: Ny tena Karazan-Pizza
Aoka isika hanomboka ny tantara momba ny pizzas tany Italia sasany fototra. maro Italiana Diniho Margherita ilay hany tena karazana pizza. Vitsivitsy sakafo mamy sy namboarina dia tokony hanao ho mahafinaritra sakafo, Toa. Ary raha ny amin'ny Da Attilio ny Margherita, marina izy ireo. namboarina koba, saosy voatabia vaovao, menaka oliva, ary fery vao mozzarella rehetra ilainao. Raha Andriamanitra no manondraka ny vavanao rehefa mamaky ity, Da Attilio no toerana ho anao. Aoka ho azo antoka izay hijery tsara izany raha mamantatra ny tanànan'i Naples.
Bari ho any Naples Lamasinina
Roma ho any Naples Lamasinina
ny https://www.youtube.com/watch?v = QyWLTQx–uc
tsirony, Verona: Ny Art ny fanaovana Doe
Sapore dia toerana any amin'izay hahitanareo ny mivelatra isan-karazany faran'izay tsara koba ao amin'ny trano fisakafoanana iray monja. Renato Bosco, ny atidoha io pick ny Pizzas toerana In Italia, Heverina ho iray amin'ireo tsara indrindra Italia ny fanaovana mofo manam-pahaizana. Koa satria afaka mahita samy hafa be dia be randram-pizzas eto, dia ho lehibe ny mangataka ny degustation sakafo. Misy ihany koa ny nanolorana azy ho samy hafa hanontany momba ny tena ratsy safidy eo anoloanao manao fanapahan-kevitra farany. Vegans matetika tia Sapore ny tolotra satria manam-be ny pizzas izay mifanaraka ny safidinao.
Milan ho Verona Lamasinina
Roma ho any Verona Lamasinina
Florence ho Verona Lamasinina
Venice ho Verona Lamasinina
PIZZERIA Brandi, Naples: Anisan'ny tsara indrindra any Italia Pizzas Hatramin'ny taonjato faha-18
PIZZERIA Brandi dia voalaza fa tompon'andraikitra amin'ny coining ny teny hoe Pizza Margherita. Dia naka izany anarana izany ho manaja ny mpanjakavavy avy tany mitovy anarana. Mazava ho azy, ny pizza miaraka amin'ireo mitovy fangaro nisy talohan'ny, fa nanao azy io moniker malaza amin'ny ny pizza rehetra izao. PIZZERIA Brandi vanim indray 1870 rehefa fandidiana eo ambany ny anaran 'PIZZERIA von Pietro. Ny fomban-drazana sy ny tantara ao ambadiky ity toerana ity no nanao azy ary malaza eo Italiana mpizaha tany. Izany no mahatonga ny vahoaka noana mbola manangona eto ho silaka ny vadin'ny mpanjaka, atao hoe mahafinaritra.
Rimini ho any Naples Lamasinina
Siena ho any Naples Lamasinina
A somary lafo ho toerana ny pizza, fa ny anatiny sy ny toerana misy azy no manamarina lehibe volavolan-dalàna. Na izany aza, ny ny pizza dia matsiro koa. Pizzeria io dia ho an'ny olona izay mieritreritra ivelan'ny boaty. Sakafo hafahafa no fanamby anao mba hanandrana zava-baovao sy miavaka, toy ny aviavy, na ny pizza miaraka amin'ny hazan-dranomasina. indray, degustation ny sakafo dia safidy lehibe eto, satria tsy mora ny manapa-kevitra hoe inona no haka. Fanampin'izany, Tsy toy ny ankamaroan'ny pizzas hafa any Italia, dia izy no tena mora mandevon-kanina.
Il Trapizzino, Roma: Misy zavatra Little Different
Il Trapizzino dia tena tsy nampoizina na inona na inona ny pizza tia. Mifanohitra amin'ny hafa pizzas in Italia, pizzas eto mijery bebe kokoa tahaka ny telozoro mofo voasesika. Ny sasany miantso azy ireo nifanizina pizzas. Inside triangles nifanizina ireo dia afaka mahita sakafo toy ny soanambo akoho, baranjely, ary mena orita. Ny koba Tena fahazavana, izay ahafahanao mihinana roa na telo sekely. io kely, toerana mahafinaritra eo amin'ny manodidina ny Testaccio dia tototry ny olona foana. Noho izany dia tsara kokoa ny manao famandrihan-toerana, fara fahakeliny, ora vitsy mialoha.
Trieste ho any Roma Lamasinina
La Spezia ho any Roma Lamasinina
Pizza AM, Milan: Toerana iray izay afaka mihinana ao amin'ny Cue Pizzas In Italia
Izany no iray amin'ireo tsara indrindra-fantatra Pizzas tany Italia sy ny any Milan. Noho izany, aza gaga raha mahita tady olona niandry ivelan'ny fivarotana. Fitadiavana fomba hampandraisana dia zavatra tsy tapaka ao Pizza AM. Koa satria tsy te handeha ianao-toeran-kafa, tompony dia hanolotra anareo ny pizza kely slices ianao raha miandry. Afaka mahazo iray vera italiana fotsy divay koa. Manana sakafo kely, monja 3 karazana pizza. Hey, ianareo no tsy manahy – izy rehetra mahafinaritra, mba tsy hoatran'ny hoe mandray anao voa mafy mihitsy.
Trieste ho any Milan Lamasinina
Perugia ho any Milan Lamasinina
Symbiosis Organic Pizza, Florence: A Healthy handray Pizzas In Italia
Raha mitady ny gluten maimaim-poana-Pizzas In Italia, Symbiosis in Organic Florence no anarany no hahatsiaro. Misy ihany koa ny safidy maro Vegan, fa amin'ny ankapobeny, mahagaga no manandrana ny pizza rehetra! Ny zavatra rehetra dia atao amin'ny sakafo voajanahary, manao izany ny pizza somary mahasalama kokoa noho ny hafa. Ny koba Tena matevina, izay mety ho tiany rehefa avy ny olona rehetra. fa – ho tia ny olon-drehetra ny manan-karena izay famenoana fanamby anao mba hihinana iray manontolo ny pizza! Raha tsy afaka mihinana azy izay rehetra, entana izay sisa tavela ka hamonjy azy noho ny rahampitso. Mbola hanandrana Ho matsiro.
Ary any no manana izany. Izany no ny safidy ny pizzas ambony any Italia. Trano fisakafoanana maro mba hitsidika, ary maro samy hafa mba hanandrana fiovana! Na izany aza, ireo soso-kevitra ihany. Afaka mahita olona maro tokoa more toerana miaraka amin'ny pizzas matsiro manodidina an'i Italia ny tenanao. Raha toa ka mila manapa-kevitra izay misy fanampiana lalana dia ny tsara indrindra ho lavitra ny Italia, hitsidika antsika amin'ny www.saveatrain.com. Ho mihoatra noho ny faly hanampy! Entana ny fiaran-dalamby dia lavitra tena ilaina mialoha ny fitsidihana, omeo anay ny antso, ary aoka ny traikefa nahafinaritra hanomboka!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome antsika ny voninahitra amin'ny rohy(www.saveatrain.com) ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-8-pizzas-italy%3Flang%3Dmg/ - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml ary afaka hanova ny / de ny / en na / en sy ny maro hafa fiteny.
#italypizza #ny pizza #pizzas Italia travelitaly